China Vest Vest mveliso kunye nabathengisi | Ukuqhayisa
Icebo lokuthwala i-laser-cut cut carter lenziwe nge-600D oxford BA. Yomelele kwaye yomelele, yomelele kwaye yomelele kwaye inxibe ukumelana.Plate Carrier Vest yenzelwe ngokukodwa ukunika umntu oyisebenzisayo uluhlu olwandayo lokuhamba kunye nokuziva okulula kunye nokuphefumla okufanelekileyo. Ngokungafaniyo nezinye iivesti ezinobunzima okanye iibhatyi ezinamaphiko kushishino, iTactical Weight Vest inokubamba iipleyiti eziphakathi nezikhulu — ngaphambili nangasemva — ngaphandle kwesithintelo. Iidyokhwe zamagxalaba egxalabeni zinciphisa ukungqubana, ii-band zentsimbi eziguqukayo ziphucula uzinzo, kunye neendlela ezintsha zokuhamba komoya kunye ne-aerospace mesh ziqinisekisa ukomelela okuzinzileyo.I-vest yeTactical iyakhawuleza ukucima / ukucima ngobungakanani obunokuhlengahlengiswa, umtya wamagxa unokuhlengahlengiswa, kunye ne-waistline nayo inokuhlengahlengiswa. Ivesti yoqeqesho isetyenziswa ngokubanzi kuqeqesho lwe-airsoft paintball, umlilo wasendle, ukusinda, ukukhangela, ukuhlangula, i-CS, inkampu, ukuzingela, imidlalo kunye neminye imisebenzi yangaphandle.
Ubunzima bePlate Vest bumalunga ne-1.48kg buqu, kwaye bunoku-odolwa njengenxalenye yephakheji eneseti yamacwecwe ahambelanayo-kubandakanya ukhetho lwakho lweVest Plates yoqobo: 3.75lb, 5.75lb, 8.75lb, okanye unako Zonke iivesti zesisindo ziza nezixhobo ezomeleleyo, iqonga lewebhu elisikiweyo le-laser-cut, kunye nesiphatho esandisiweyo kunye nenkqubo yokukhululwa ngokukhawuleza.
Iipads zamagxa ezinokushenxiswa ezishenxisekayo ezinokuhanjiswa kunye nezikhokelo zokuloba kunye neluphu. Umgangatho ophezulu wangaphakathi we-mesh yangaphakathi ivumela i-anti-slip umtya wegxalaba ukuba ikunikeze intuthuzelo ephezulu.
1.Ipleyiti yenqwelomoya yenqwelomoya yenziwe nge-600D oxford BA.
2.Umbala: I-navy eluhlaza, emnyama, eluhlaza, i-tan, ityphon, i-CP emnyama, i-multicam tropic, igrey, i-CP
Ubunzima be-3.Vest imalunga ne-1.48 yayo.
4.Can ukupakisha laser ipleyiti-cut eqhelekileyo: 3.75lb, 5.75lb, 8.75lb
5.Do irabha logo nayiphi qty.
6.Package: 1pc / iplastiki, 10pcs / ibhokisi: 62 * 55 * 30cm
Egqithileyo Ipleyiti yebumper ephezulu
Okulandelayo: Ukuxhathisa ibhendi
Ubunzima bePlate Vest
Yiphathe ingxowa yesanti eStrongman